China Leopard Retro Bariis Cidiyaha Warshada muraayadaha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Yinfeng
Leopard round frame print retro bariis cidiyaha muraayadaha muraayadaha ayaa ku haboon safarka, safarka, wadista, iwm., taageer OEM iyo ODM.
Shayga No. 5186
Midabada 6 midab
Naqshadaynta casriga ah ee qaabka wareega ee 2021, oo leh muuqaalka daabacaadda leopard, ayaa lagu qurxiyaa ciddiyaha bariiska saxda ah. Waxaa jira laba bariis oo bariis ah oo ku yaala qaabka iyo macbadyada, kuwaas oo si buuxda u muujinaya soo jiidashada muraayadaha muraayadaha.
Marka la eego shuruudaha tijaabada tayada sare leh, wax soo saarkayaga la safeeyey ayaa ka dhigaya tayada badeecada xitaa ka sii fiican. Muraayadaha tayada sare leh ee tayada sare leh ma ilaalin karaan oo kaliya indhaheena hoostooda iftiinka qoraxda, laakiin sidoo kale waxay muujinayaan soo jiidashada muuqaalkaaga. Khadadka jilicsan iyo curvatures ee jirku waxay dhammaantood soo bandhigayaan shuruudaha tayada alaabta. Shirkaddayadu waa warshad muddo dheer la aasaasay oo ku takhasustay soo saarista muraayadaha qorraxda, taageeridda macaamiisha kormeerka warshadaha iyo muujinta xooggooda. Waqtiga gaarsiinta waa sax, tayaduna waa mid sareysa. Inaad na doorato waa doorashadaada ugu saxsan. Haddii ay jirto wax dhibaato ah oo ku saabsan xidhitaanka macaamil ganacsi, waxaanu kuu xallin doonaa sida ugu dhakhsaha badan, marka hore macmiilka.
Qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka wuxuu ka samaysan yahay qalab raaxo leh, iftiin iyo jilicsan, iyo naqshadda fudud uma baahna in la qurxiyo. Xirmooyinka sanka ee hal-xabbo ah ayaa ka samaysan waxyaabo ammaan ah oo aan xasaasiyad lahayn si loo yareeyo is-jiidhiyaha sanka sanka ee buundada sanka, si aanay calaamad cas u lahayn buundada sanka. Macbadyada qalloocan waxaa loo qaabeeyey iyadoo loo eegayo habka ergonomic si ay ugu habboonaato wejiga inta badan dadka xiran oo ay yareeyaan cadaadiska dhegta.
1.Intee in le'eg ayaan heli karaa lacag bixinta ka dib?
Qiyaastii 7-10 maalmood ayaa soo diri lacagta kadib
2.Maxaad u taageertaa amarrada yaryar?
Amarka dufcadaha yar yar ayaa macaamiisheena ka dhigi kara wax khatar ah oo kayd ah, macaamiishu waxay iibsan karaan alaabta ay u baahan yihiin wakhti kasta, iyaga oo aan ka welwelin in alaabta aan la iibin karin.
3. Intee in le'eg ayaad ku soo rari kartaa dalabaad badan?
Dalabka waaweyn, waxaan macaamiisha siin doonaa caddayn iyo xigasho. Kadib xaqiijinta faahfaahinta, waxaanu u sheegi doonaa wakhtiga macmiilka si waafaqsan tirada dalabka. Sida caadiga ah, waxaa lagu soo saari karaa 15 maalmood gudahood.
4.Waa maxay habkaada dhoofinta?
Si loo hubiyo in aad si dhakhso ah u hesho alaabo,ma dooran doono raqiis raqiis ah maraakiibta badda iyo habka iyada oo aan la helin macluumaad saadka
5. Sideen ku heli karaa muunada?
Waxaan taageernaa muunad bilaash ah, kaliya waxaad u baahan tahay inaad bixiso kharashka dhoofinta waa ok, waxaad heli kartaa ilaa 3-5 maalmood.
6. Adeeg noocee ah ayaan heli karnaa?
Waxaan ku meelayn doonaa adeeg macmiil oo kala duwan macaamiil kala duwan. Adeegga macaamiishuna waxay ku talinayaan badeecado kala duwan oo iib ah oo kulul iyadoo loo eegayo xaaladda macmiilka iyo codsiyada, si loo hubiyo in ganacsiga macaamilku uu noqdo mid weyn oo weyn.
Hore: Hip-hop retro wareega muraayadaha muraayadaha indhaha
Xiga: Muraayadaha muraayadaha indhaha ee ragga TR90
Barbarro isbarbaryaac ah ookiyaalaha dumarka retro 7477
Camouflage muraayadda muraayadda muraayadda ee darawalnimada
New fashion alwaax muraayadaha ragga retro
Ragga casriga ah ee muraayadaha birta ah ee hal gabal ah
Muraayadaha Weyn ee Weyn, Muraayadaha Weyn ee Isha Keliya, Muraayadaha Xisbiga ee Shakhsi ahaaneed, Muraayadaha Qorraxda ee La Weyn, Muraayadaha Iftiinka Weyneeya, Muraayadaha Xisbiga,